ATN: စိတ်ညစ်စရာသတင်း၊ သေခြင်းတရား၊ မိသားစု...
အင်းးး အကိုကြီးစာဖတ်ရတာ ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီး ခံစားရတယ်ဗျာ...။
အကို အနားလာထိုင်ပြီးပြောပြနေတာကို နားထောင်ရသလိုပဲ..။း)
အကုန်လုံးက ကံ . ကံ ၏ အကျိုးတွေပါပဲ
အကြောင်းတရား ပါလာရင် ဘာမှ ပြေးမလွတ်ဖူး
လူတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်ရင် ရှင်ကွဲတွေ သေကွဲတွေ ဘယ်ဖြစ်ချင်ပါ့မလဲနော် ဒါပေမဲ့လည်း ...
ဝမ်းနည်းလည်း သီချင်းညည်းတတ်တာ ကောင်းပါတယ်။
စိတ်ညစ်စရာတွေများလာရင် စိတ်ညစ်ရမယ့် သတင်းတွေ မဖတ်ဘဲနေ မကြည့်ဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးပါ ... ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ ( အမှန်တော့ လူတွေက ပျက်တာပါ ) လူဖြစ်လာရတဲ့ ဒုက္ခ ..အဲ ဒုက္ခတွေထဲကနေ ကိုယ့်ထက်ပိုဆိုး တဲ့ သူတွေ ရှိသေးပါလား လို့ တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်သက်သာရာရအောင် နေကြည့်တာလဲ နည်းလမ်းကောင်းတခုပါ ... ဘယ်သူများ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ ဆိုတာ ရှိမှာမို့လဲ ... ကိုအောင်သာက ကျမထက် စာတွေနှံ့နှံ့စပ်စပ် ဖတ်ထားပြီးတဲ့သူ ဆိုတော့
ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဆိုတာ
ရွေးချယ်တတ်မှာပါ .... မိသားစုအားလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ ....
အစ်ကိုတို့ မိသားစုကို ရှိသမျှ ဘုရား အကုန်
ခွဲခွာခြင်းက စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ဘ၀တွေဖြစ်ပေမယ့် တန်ဖိုးလေးတွေကိုတော့ ကိုယ့်လက်နဲ့ရေးသွားချင်ကြမှာ လူသားသဘာဝပါ ... လို့ ထင်ပါ
တခနတာ ဒုက္ခတွေပါဗျာ။ နောက်ပိုင်း အဆင်မပြေဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ လတ်တလောအဆင်မပြေတိုင်း ကိုယ်မသိရတဲ့ သားသမီးတွေ အနာဂတ်ကိုပါ ကိုယ်နဲ့ယူသွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ငယ်စဉ်က ဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားရပြီး နောက်ပိုင်း ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့သူတွေလဲ တပုံကြီးပါ။ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်တွေးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာ။
မဟေသီနဲ့အတူသေချင်ပါတယ်ဆိုောတက ဒုက္ဖ. မဟေသီနဲ့ကလေးတွေ ကမှ မသေချင်သေးဘဲ. အတင်းဆွဲမခေါ်သွားပါနဲ့လေ.
ဆုလဲမတောင်းကောင်းပါဘူး ရှင်အတူ သေအတူ.. ကံကလည်းအဲသလိုဖြစ်လာဘို့ဆိုတာ အန်မတန်မှာ rare ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်တွေ သိတ်ရှုပ်ထွေးနေသလား ရှင်းနေသလား. တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ. တရားထိုင်ပါလို့ ပုံမှန်အတိုင်း နားချရမယ်။ တို့တွေ သိတ်စိတ်၇ှုပပ်နေတုံးက ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့စာအုပ်တွေ ဟာ ..အားတွေ ဘဲ. အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတို့. ကျန်တာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး စာအုပ်တွေတော်တော်များများ ဖတ်တာ စိတ်သက်သာရတယ် အခုထက်ထိောတ့ ပုံးထဲမှာ ထည့်ထားတုံးဘဲ လိုရင်ယူဖတ်ဘို့ . အွန်လိုင်းမှာလဲ အီးဘွေတ်တွေရှိနိုင်တယ်။ ရှာမပေးတတ်တာတော့စိတ်မကောင်းပါ. အဲဒီ ဆရာတော်စာအုပ်တွေ ကအ တော့်ုကိုသက်သာရရစေတယ်။ မှားတော့မှားနေတယ် ကိုအောင်သာငယ် ပြင်ဘို့ကြိုးစားပါဦး. ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က ပိုက်ဆံမရှိဘူး။ ဝင်တာလဲမလောက်ဘူး အဖေ တစ်ယောက်ဘဲ အလုပ်လုပ်တာ အဖေ က သားသမီးလေးယောက်. အမေ ကပိုက်ဆံမရှိလို့ အမျိုးမျိုး ကြံဖန်ခဲုရတယ် အသေးစိတ်တော့မရေးပရစေနဲ့တော့အမေ့အတွက်ိစတ်မကောင်းဖြစ်ရလို့ အဲဒါကို သနားပြီးအဖေနဲ့အမေက သူတို့ဘာသာ သတ်သေလိုကရင် ကလေးတွေ ပါ သတ်သေခိုင်းလိုက်ရင် တို့မောင်နစ်မတွေ လူ့လောက မှာမရှိတာ ကြာရော့မယ် အခုအားလုံးဘဲ သူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေကြါပတယ် ဘဝဆိုတာ အဆင်ပြေတာလဲရှိမယ် မပြေတဲ့အချိန်လဲရှိမယ်။ အခုလဲမောင်နစ်မတွေ အတူမနေကြရပါဘူး. တကွဲဆီပါဘဲ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မောင်နစ်မတွေလောကမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ အားရှီစရာပါ. ကွဲကွာနေကြပေမဲ့လဲ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးနေကြဆဲပါ။
လိုရင်းကတော့ရုးနေပြီ. စိတ်မှန်အောင်ပြန်ကြိုးစားပါ. ဒါ………..ဘဲ
ဘုရား...ဘုရား... မမကေအိုအမ်ရဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ကောမန့်ပါလား...။
တကယ်တော့ ဒီတစ်ပုဒ်ကို ခပ်လျှမ်းလျှမ်းကြည့်လိုက်တာ မဖတ်ရဲလို့ မဖတ်ရသေးဘူး၊
ကောမန့်တွေ ဖတ်လိုက်တော့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ၊ မဖတ်သေးဘူး... ။ နောက်မှ ဖတ်မယ်..။
အကိုတို့ မိသားစုလေး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းသွားပါတယ်...
My mother was unfamiliar with music, however she frequently said her favourite song "Star, Let make light" by Zaw One.
If finance matter lead to give up everythings, please look glance to our poor Myanmar peoples. Though they are poor, they whistands their lives firmly taught by Buddha.
Ko Aung Thange.
Every time I read your articles, I see myself in there. I've been in your situation before, it seems to me that when I look at you, I see myself in pain.I urge you to write more articles about our life in States, at lease we can relieve ourselves that we are not alone.
Ako! life is very short. Don't think negative thinking.No body or things or reason influence on you.You can make yourself happy or sad.Depend on your mind.Pls build good minded.Every body having problem in the world not only you.
မိသားစု ၅ယောက် ၅ကွဲ ကွဲတာတောင်ရင်ဆိုင်နိုင်သေးတာဘဲ...ဆင်းရဲတာနေ့ဘဲ ရှိတယ်..(sun..tue) ကျန်တာဘာမှ စိတ်ဆင်းရဲစရာမလိုဘူး..ပြောတော့မေမေ့သား..စိတ်ဓါတ်က..ငွေသောင်ယံ.................. မိသားစုမှာ အစစအမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာရောသတိထားပါဥိး....လူတွေအားလုံးကအရုးတွေကြီးဘဲလို့ ဘုရားကဟောထားတာဘဲ......လုပ်စရာတွေအများ ကြီးကျန်နေသေးတာဘဲ...အဲဒါတွေလုပ်ချင်လို့.အမေနဲ့ခွဲခဲ့တာမဟုတ်လား...ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုမပျက်နဲ့...အဖွားကိုသတိရ...မြွေမှန်ရင်တွင်းဝင်ဖြောင့် ပါလိမ့်မယ်.......